Qabyaalada Iyo Hagardaamooyinka Qarsoon Ee Ay Ku Leedahay Umada Ku Dhaqanta: W/Q Axmednuur Maxamuud Khalif. |
Qabyaalada Iyo Hagardaamooyinka Qarsoon Ee Ay Ku Leedahay Umada Ku Dhaqanta: W/Q Axmednuur Maxamuud Khalif.
Geesta kale qabyaaladu waxay aastaa horumarka iyo waxqabadka bulsho ama xukumadeed iyada oo god dheer ku rida wanaagkasta oo la qabtay
Hagardaamooyinka qabyaaladu ay leedahay maaha wax hal maqaal lagu soo koobi karo lakiin hadana waxaan jeclaystay in aan iftiinsho waxyaabaha laga dhaxlo qabyaalada marka loo adeegsado sifaha khaldan ee indho la,aanta iyo dhago la,aanta ku dheegantahay.
Hadaba dhamaanteen waxaynu ka wada dharagsanahay khatarta iyo aafooyinka ay leedahay qabyaaladu oo sobabta Isku dhac , Sad-bursi , Xatooyo aan xisaab lahayn, Musuqmaasuq, Eex, qof jeclaysi , Jahli iyo Aqoonta oo meesha ka baxda.
Geesta kale qabyaaladu waxay aastaa horumarka iyo waxqabadka bulsho ama xukumadeed iyada oo god dheer ku rida wanaagkasta oo la qabtay kana dhigta danbas iyo habaas lagu kala yaaco. Lakiin qabyaaladu waxay ina tustaa xiqdi iyo xasad ku dhex
baaha bulshada ama maamulka isticmaala iyada oo meesha ka saarta daacadnimadii iyo kalsoonidii umada dhexdeeda ka jirtay. Wakhtikast waxaynu ka hadalnaa khasaaraha ay leedahay qabyaaladu oo ah in laga dhaxlo dhibaatooyin badan kuwaasi laga soo gayoomi Karin hagar daamooyinkooga hadii wax laga qaban waayo intay ay dhawdahay.
Bulsho ama xukumadii waxay xoroodaa marka ay ka dheeraato kaabayaasha ay leedahay qabyaaladu oo lidi ku ah garwaaqsiga aadamaha aqoontiisa iyo waxtarkiisaba oo ku qutoma aqoon , daacadnimo iyo amaano xifdin lagu tijaabinaayo wakhti kooban oo hadii u ka soo bixi waayo masuuliyadii u hayey umadiisa lagala noqonaayo lakiin inta ay qabyaaladi ka dhex jirto bulsho meel kuwa nool waxay ku tahay bar madaw oo aan lahayn badhaadhe iyo barwaaqo midnaba . Bal aynu eegno xumaanta iyo duruufaha ay leedahay qabyaaladu oo ah tan is dhaafisa umadaha aduunyada ku nool waxayna meesha ay haleesho laga helaa dhamaan halahaasi aan tusha ku soo tiraabay oo ugu horeeyaan Musuqmaasuq iyo Nin jeclaysi aan loo meel dayin kuwaaso dhamaantoodna ku habsada shicib iyo dawladaba. Hadaba dhamaanteen waxaynu garanaynaa dhibaatada ay qabyalaadu leedahay walaw su,aalo badan maskaxdeena ka dhex quuxayaan oo ay ka midyihiin kuwan iyo kuwa kalaba:
Ø Maxaa koriya qabyaalada ?
Ø Maxaa u sobab ah in ay bulsho meel wada dagani qabyaalad ku dhaqanto?
Ø Maxaa lagaga bixi karaa qabyaalada ?
Ø Intee in leeg ayey qaadan doontaa qabyaalada oo la cidhibtiraa?
Hadii aan su,aalahan mid ,mid u dul istaago oo aan raygayga yar ee kooban ku saleeyo, waxay ila tahay in qabyaalada ay koriyaan, Aqoon yarida, Faqriga, Siyaasada oo si aan wanaagsanayn lo adeegsado iyo humaag been ah oo umada loo sawiraayo si lagu gaadho danta shaqsinimo halkii ay ahaan lahayd in si guud looga fikiro danaha umadan danyarta ah.
Sido kale waxyaabo badan ayaa sobab u ah in bulsho meel wada dagani ay ku dhaqamaan qabyaalada waxaana badhitaara tiirasha ugu waawayn ee ay leedahay qabyaaladu waxaana ka mid ah, Dhaqaale la,aanta , Siyaasada liidata ee ma dhalayska ah, Nin jeclaysiga iyo Cadaalada oo dhinac u xaglisa.
Qabyalaada waxaa lagaga bixi karaa si fudud oo waxay u baahantahay hogaamiye iyo bulsho ku dhaqanta cadaalad , sinaansho isla xisaabtan dhab ah , xilkasimo, iyo tartano xalaal ah oo umada dhexdeeda ka dhaca oo qofkii ku guulaysta lagu hambalyeeyo. Hadii intaasi la sameeyo waxaa wakhti kooban meesha kaga baxaaya qabyaalada , qaraabo kiilka ,eexda ,musuq-maasuqa iyo dhamaan waxyaabihii badnaa ee qabyaalada hoyga u ahaa.
Guntii iyo gunaanadkii waxaa dhamaanteen xil inaga saaranyahay in aynu la dagaalano qabyaalada iyo qabiil kiilka si aynu u gaadhno horumar iyo barwaaqo saldhigeegu yahay cadaalad .